Doorashada Aqalka Sare oo maanta ka dhaceysa Baydhabo | KEYDMEDIA ONLINE
Doorashada Aqalka Sare oo maanta ka dhaceysa Baydhabo
Maamulka uu hoggaamiyo Madaxweynaha Madaxtooyada ku daaban ee Koofur Galbeed, ayaa la filayaa in ay dhawaan ka billaabato wajiga koobaad ee doorashada Aqalka Sare.
BAYDHABO, Soomaaliya - Dowlad goboleedka Koofur Galbeed, ayaa noqonaya maamulkii labaad ee guda gala doorashooyinka, waxaana maaanta la filayaa in magaalada Baydhabo lagu doorto shan Xildhibaan oo ka mid noqon doona Baarlamaanka Aqalka Sare.
Wajiga kobaad ee doorashada Aqalka sare ee DG KG, 10 musharrax ayaa u baratami doona shan kursi oo labo ka mid ah loo gooni yeelay haweenka.
Baarlamaanka Maamulka ayaa dooran doona, waxaana musharrax kasta la siin doona hadal jeedin kooban, ka hor inta aan la guda galin codeynta.
Cabdicasiis Lafta-Gareen, Madaxweynaha Koonfur Galbeed, ayaa dhamaan kuraasta maanta la soo dooranayo u xiray shaqsiyaad ay ehel iyo asxaab yihiin, wuxuuna tartanka ka hor istaagay qaar ka mid ah xildhibaanadii afartii sano ee la soo dhaafay matalayay KG.
Kooxda Farmaajo, oo hore kursi dhiig leh ku fariisiyay Lafta-gareen, ayaa la soo warinayaa in ay si weyn ugu lug leeyihiin doorashada KG, waxaana Baydhabo ku sugan Kullane Jiis oo gacanta midi gee Fahad Yaasiin ah, isla-markaana ku heyb ah Farmaajo.
Kismaaayo, ayaa hore u soo saartay afar xildhibaan oo Aqalka Sare ah, labada maamul ayayna baaqi u sii ahaan doonaan kuraas kale.